ရန်ကုန်၊ မေ ၂ ကျေးလက်နေဒေသများတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဖြန့်ဝေရန်နှင့် နိုင်ငံအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးမျှော်စင်များအတွက် လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့် လျှပ်စစ်မီးပေးစက်များတည်ဆောက်ရန်အတွက် နော်ဝေအစိုးရပိုင် Norfund နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု Yoma Strategic က ကြေညာလိုက်သည်။ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာမည့် Yoma Micro Power (S) Pte.Ltd. တွင်.
NLD အစိုးရလက်ထက် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့် တိုးတက်မှုမရှိ
မေ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ကမ္ဘာ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အခြေအနေ အကဲဖြတ်အစီရင်ခံကို ပဲန်မြန်မာနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ပြန်
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံအား အတိုးမဲ့ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ပေးရန် ဆုံးဖြတ်
မြန်မာအစိုးရက ဆောင်ရွက်လျက်နေသော မေခရိုစီးပွားရေး တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအား အတိုးမဲ့ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ပေးရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အတည်ပြုလိုက်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုများ ခေတ်မီ တိုးတက်ရေးနှင့်.
Frontier နှင့် စောကပလူစိုး ရေးသားသည်။
ကျပ်ခုနစ်ဘီလျံနှင့်အတူ စာရင်းပျောက်နေသည့် မော်တော်ယာဉ်များကို မကွေးအစိုးရ ပြန်လည်ရရှိ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အပြောင်းအလဲတွင် ကျပ် ခုနစ်ဘီလျံကျော်နှင့်အတူ စာရင်းပျောက်နေခဲ့သည့် မော်တော်ယာဉ်များကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးဘုန်းမော်ရွှေနှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရထံ ဧပြီ ၂၉ ရက်နေ့က အပ်နှံခဲ့သည်။
ကျပ် ခုနစ်ဘီလျံ စာရင်းပျောက်မှုတွင် ပတ်သက်မှုမရှိဟု မကွေး NLD အမတ် ငြင်းဆို
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဖွံ့ဖြိုရေးဖောင်ဒေးရှင်းတွင် ၎င်း၏အမည် ပါဝင်နေခဲ့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ ပတ်သတ်မှုမရှိခဲ့ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က ပြောကြားလိုက်သည်။
သာကေတက အစ္စလာမ်စာသင်ကျောင်းလေးကျောင်း ဘယ်လိုပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသလဲ
ရန်ကုန်မြို့၊ သာကေတမြို့နယ်၊ အနော်မာ ၁ ရပ်ကွက်မှ အစ္စလာမ်စာသင်ကျောင်း လေးကျောင်းအား အမျိုးသားရေးအဖွဲ့ဟု ၎င်းတို့ကိုယ်ကို အမည်ခံယူထားသောအဖွဲ့မှ ရဟန်းနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များက အကြပ်ကိုင်ပိတ်ခိုင်းမှု ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုအား အချိန်ကာလနှင့်တကွ ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
ရခိုင်အရေးတွင် တရုတ်အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနည်းတူ ပါဝင်ကူညီနိုင်
မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှစ်နိုင်ငံအကြား ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စမှာ ကူညီဖြေရှင်း ပေးလိုတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ အခြားသော နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနည်းတူ ကူညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ပြောလိုက်ပါတယ်။